မောင်လူရေး – နိပ်စပိ | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူရေး – နိပ်စပိ
“လူ့အခွင့်အရေးသား စားတဲ့သူ လာတုန်း မေးရအုံးမှာပ့ါ”
“အဲပါ့ … ဟို ဘာတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် ဆိုလား အဲဒီအလုံး ခညားတို့ ခနခန ပြော ပြောနေကြတယ်လေ”
“အဲဒီအလုံးက စိန်တလုံးထက် ဈေးကောင်းတာကိုး၊ ပြောတာပေါ့ဗျ၊ ဘာဖစ်လဲ”
“ဘာမှ ဖစ်ပါဘူး၊ အဲဒါက တကယ်ကော ရှိရဲ့လားဗျာ”
“ရှိလို့ဘဲ သူ့ဟာနဲ့သူ ကိုးကွယ်နေကြတာဘဲလေ”
“ဟိုဗျာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ဆိုတာ တကယ်လက်ခံနိုင်ရဲ့လားလို့ ပြောတာဗျ”
“ဟိုလေ ဖိုးတခေတ် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေကိုမှ အားမနာပါးမနာဗျာ၊ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဖိုးတခေတ်ကို ပြောင်ကြ လှောင်ကြလိုက်တာများ ဘာဖွတ်ရာမှကို မကောင်းတော့ဘူးဗျ”
“အော် အဲဒါလား ၊ အဲဒါက ဒီလိုဗျ … အင်း …. ဟိုလေ …. ဘိုပြောရမလဲဆိုတော့”
“ဟိုဘက်က ပြန်ပြီး ခများတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တာတွေကို အဲလို ပြန်နှက်ရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူးနော်”
“ဟာ … ဟေ့လူ … အဲဒါ ဟိတ်စပိ ဗျ”
“ဘာလဲဗျ ဟိတ်စပိ ဆိုတာ၊ ဘိတ်ငပိလိုဟာလား”
“ဟာ … ဘိတ်ငပိထက် အများကြီးစားကောင်းတာပေါ့ဗျ၊ ဟိုတယ်တွေ ဘာတွေမှ ရောင်းတာ၊ လမ်းဘေးရတာ မှုတ်ဖူး”
“ဟုတ်လား စားဘူးဘူး၊ ဘာတွေနဲ့လုပ်ထားတာလဲ”
“ဟိတ်စပိဆိုတာ ဘိုလိုပြောတာ၊ မြန်မာလို အမုန်းစကား တဲ့ဗျ၊ သူများ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တာတွေ စော်ကားရင် လှောင်ရင် ပြောင်ရင် အမုန်းစကား ပြောတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်”
“အော် ဟို ပြင်သစ်မှာ … ဟို … လူရွှင်တော်နာမည်နဲ့ ဟိုဟာလေ – ချာလီချက်ပလင်”
“ဟုတ်တယ် ချာလီမဂ္ဂဇင်းမှာ မိုဟာမက်ကို ပြောင်လို့ဆိုပီး သေနတ်နဲ့ ဗျင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးလေ”
“ဟင် … အဲလိုဆို အဲဒီလူတွေက အမုန်းစကားတွေ ဒီလောက် အမုန်းပွားနေတာ မတား မဆီးကြဘူးလားဗျ”
“ပိုက်ဆံမရတဲ့အလုပ် ဘယ်သူလုပ်မလဲ ကိုယ့်လူရ၊ ဖိုးတခေတ်သရော်တာ တားလို့ ဘယ်သူက ထမင်းကျွေးမလဲ၊ ငပေါစာရင်းတောင် ဝင်သွားနိုင်သေးတာဆိုတော့ အဲဒါမျိုးကျ နိပ်စပိ လို့ခေါ်တယ်၊ မြန်မာလိုတော့ အဝုန်းစကားပေါ့”